Dori Fish အပါအဝင်အသားအစုံကို Hot Pot, BBQ ,Dimsum တွေအနေနဲ့သုံးဆောင်နိုင်မယ့် Seoul Kitchen….. – FoodiesNavi
Dori Fish အပါအဝင်အသားအစုံကို Hot Pot, BBQ ,Dimsum တွေအနေနဲ့သုံးဆောင်နိုင်မယ့် Seoul Kitchen…..
By yin sandi On February 14, 2018 0
အစားအသောက်နန်းတော်ကြီးလို့ ? ? မှတ်ချက်ပြုလို့ရတဲ့မန္တလေးမြို့တော်ကြီးမှာ ? ? BBQ Buffet တွေအပြိုင်အဆိုင်ရှိတဲ့အထဲက ဘူဖေးဟင်းလက်ရာကောင်းကောင်း ၊ အကင်လက်ရာကောင်းကောင်းကို အဝစားနိုင်ပြီးအရသာရှိတဲ့ ဒင်းဆမ်းတွေပါရရှိနိုင်မယ့် ? ? Seoul Kitchen ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုလမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ?? ?? ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၆၅၄) ၊ လမ်း(၈၀) ၊ (၃၈)လမ်းနှင့်(၃၉)လမ်းကြား ၊ မန္တလေးဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ? Seoul Kitchen ရဲ့တခြားဆိုင်တွေနဲ့ မတူတဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတင်သွင်းပြီး အရိုးနဲ့အဆူးလွတ်ကာ ?‍♀️ ?‍♀️ အဆီဓာတ်နည်းပါးပြီးပရိုတင်းတင်းဓာတ်များပြားတဲ့ Dori Fish တွေကိုရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? Dori Fish တွေဟာဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအစားများလာပြီး ဝိတ်ချနေသူတွေအတွက်လည်း အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ ? ?
Seoul Kitchen မှာရရှိနိုင်တဲ့ Buffet ဟင်းလျာတွေကတော့ ? ဂဏန်းချဉ်စပ် ၊ ? သုံးထပ်သားဘူဂိုလ်ဂီ ၊ ? နံရိုးကြော် ၊ ? ကင်းမွန်သုပ် ၊ စင်းကော(ကြက် ၊ ဝက် ၊ အမဲ ) ၊ ကြက်ကုန်းဘောင် ၊ Shishamo ငါးကြော်(ဂျပန်စတိုင်ငါးဥပါတဲ့ငါးကြော်) ၊ ကြက်တောင်ပံမရောနိစ်ကြော် ၊ ပြောင်းဖူးစအုကြော် ၊ ထမင်းကြော် ၊ ခေါက်ဆွဲကြော် ၊ ကိုက်လန်ကြော် ၊ ကြက်သွန်ကွင်းကြော် ၊ ? ဆူရှီ ၊ ကြာဇံသုပ် ၊ ကော်ပြန့်ကြော်တွေကိုအဝစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဝက်သုံးထပ်သား ၊ ဝက်ဂုတ်သား ၊ ? အမဲလိုင်းသား ၊ ကြက်သား ၊ ? ဆိတ်သား ၊ ? ပုဇွန် ၊ ? ပြည်ကြီးငါး ၊ ? ကင်းမွန် ၊ ဝက်အူမ ၊ ? ဆာဘားငါးစတာတွေအပြင် ဟော့ပေါ့အတွက်ကိုတော့ ဂုံး ၊ ခရု ၊ ဝက်ဦးနှောက် ၊ ? ဂဏန်း ၊ ဆိတ်သွေးခဲ ၊ ဝက်သွေးအစာသွပ် ၊ ရွှေအပ်မှို ၊ တာချီဆိုင် ၊ ငုံးဥ ၊ ? ကြက်ဥစတာတွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအမည်စုံလင်လှပြီး ? ? နူးနူးအိအိအသားပေါင်းဒင်းဆမ်းတွေကိုလည်း အိအိစက်စက်လေးသုံးဆောင်နိုင်သလို ? ? အီလည်တာတွေမရှိဘဲ ? ချိုစပ်ကွက်တိဖြစ်တဲ့နံရိုးပေါင်း ၊ နူးနေအောင်အချိန်ယူပေါင်းထားတဲ့ ? ကြက်ခြေထောက်ပေါင်း ၊ လတ်ဆတ်ပြီးအသားကောင်းတဲ့ ပုဇွန်ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်လေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပုဇွန်အပေါင်းများ ၊ ဒင်းဆမ်းနဲ့အထူးလိုက်ဖက်မယ့် ☕ မေမြို့ကော်ဖီနှပ်တွေကို သုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒင်းဆမ်းကိုတော့ ⏰ ⏰ မနက်(၆)နာရီခွဲကနေ နေ့လည်(၂)နာရီအထိရရှိနိုင်ပြီး Hot Pot နဲ့ BBQ ကိုတော့ ? ? နေ့လည်(၁၂)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
Image Source : www.facebook.com/seoulkitchen
In Restaurant Guides Tagged BBQ, Dim sum, Hot pot Leaveacomment
ပင်လယ်ကျွန်းစုဒေသတွေကတင်သွင်းတဲ့ ရှားပါးပင်လယ်စာအစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာရရှိနိုင်မယ့်……